कठिनाइबीच अघि बढ्ने प्रयास | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
म यो व्यवसायमा लागेको १३ वर्ष भयो । ‘गल्र्स एन्ड गाइज’ भनेर धनगढीको एलएन चोकमा पार्लर खोलेको छु । मेकअप स्टुडियो पनि छ । हामी हेयरकट, मेकअप, फेसिएल ,ब्राइडल मेकअप जस्ता सबै काम गर्छौं ।
मैले बैंकक्, दिल्ली, मुम्बई र बेल्जियमबाट मेकअप आर्ट सम्बन्धी तालिम लिएको हुँ । लकडाउनले गर्दा अहिले मेरो व्यवसाय पूरै ठप्प छ । अहिले २० दिन जति भयो खोलेको । अहिले पनि पुलिसहरुले खोल्न त दिंदैनन् । कानुनी रुपमा खोल्न दिइएको छैन तर हामी जोखिम मोलेर खोलिरहेका छौं । बिहानै आउछौं सलुनलाई पूरै स्यानिटाइज गर्छौं । एक जनाको सकेपछि मात्रै अर्को ग्राहकलाई सेवा दिन्छौं । फेसिएल मास्क लगायतका सुरक्षाका उपाय लगाएर काम गर्छौं । अप्ठेरो त छ नै । यो रोग सारा संसारलाई नै लागेको छ । त्यही भएर मैले चित्त बुझाएको छु ।
समस्या त कति हो कति छ । कोठाको भाडा तिर्नुपर्ने, स्टाफको तलब दिनुपर्ने । सामान त्यतिकै थन्काएर राखेको छु । डेट एक्सपाएर होला भन्ने डर छ । फेरि नयाँ सामान कसरी ल्याउने हो ? मैले ल्याउने सामान सबै बाहिरबाट मगाउने गरेको छु । अहिले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छन् । सामान नपाइएला भन्ने चिन्ता छ ।
तर यस्तो बेलामा चुप लागेर बस्न पनि मिलेन । सबै कुरा मिलाउनै पर्छ । मैले आफ्ना स्टाफको तलब काटन मिलेन । उनीहरुको आशाभरोसा ममा हुन्छ । काम गरिसकेपछि आश लाग्नु स्वाभाविक हो । फेरि यस्तो बेलामा मैले आफ्नो कर्तव्य पनि भुल्नु भएन । मलाई अहिलेसम्म साथीहरुले साथ दिएर नै यो पार्लर चलाएको छु । टिम वर्क चाहिन्छ । उनीहरुलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । यता घरबेटीले भाडा मागेका मागेकै छन् । भाडा पनि तिर्नै पर्‍यो । हाम्रो पार्लर दुई ठाउँमा छ । एउटा पार्लर भएको ठाउँका घरबेटीले त आफै आएर ‘घरभाडामा आधा कम गरिदिन्छु अहिलेसम्मको’ भन्नुभयो । अर्को घरबेटीले भने, ‘पूरै समयको भाडा घटाउन सक्दैनौं, एक महिनाको मात्रै कम गर्न सक्छौं भन्नुभयो । यस्को मतलब ४ महिनामा १ महिनाको घटाउँदा पनि ३ महिनाको त पूरै भाडा तिर्नुपर्छ ।
तीन महिना हामीले काम गर्नै पाएका छैनौं । आम्दानी छैन । वैशाख, जेठ र असार हामी सबैभन्दा बढी व्यस्त हुने समय हो । १२ महिनामा ६ महिना मात्र हो अलि कमाइ हुने । ६ महिना बिहे हुने सिजन हो । मेकअपको सिजन हो । त्यसबाहेकका महिनामा बिजनेस थोरै मात्र हुन्छ । ६ महिना काम गर्नुपर्ने ठाउँमा अब ३ महिना त्यसै गइसक्यो । अब हामी व्यस्त हुने महिना मंसिर, माघ र फागुन मात्रै हुन् । यी तीन महिनाको आम्दानीले वर्षभरिको खर्च धान्न अलि असम्भव हुन्छ । फेरि यस पटक पात्रो हेर्दा माघ र फागुनमा त्यति लगन छैन भन्ने थाहा पाएको छु । अब जसरी भए पनि भाडा तिर्नुपर्छ, स्टाफलाई तलब दिनुपर्छ । स्टाफलाई एक महिनाको तलब दिंदा पनि किस्तामा दिइराखेको छु ।
अहिले काम गर्न पनि गाह्रो छ । ग्राहकहरुलाई भीड नगर्नु भनेर सम्झाउनुपर्छ । ग्राहक सितिमिति आउन खोज्दैनन् । उनीहरुलाई पनि कोरोनाको डर छ । फेरि नचिनेको मान्छेलाई बोलाएर सर्भिस दिन हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । भोलि फेरि संक्रमित भयो भने हामी सबैलाई गाह्रो । थ्रेडिङ पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौं । हामीले जुन दरमा पैसा लिइराखेका छौं त्यसले बाँच्न गाह्रै छ । किनभने हाम्रो खर्च झन् बढेको छ । ग्राहकहरुका लागि स्यानिटाइजर राख्नुपर्ने हुन्छ । फेरि कोही पुरानो मास्क लगाएर आउनुहुन्छ । उहाँहरुलाई नयाँ मास्क दिने गरेका छौं । त्यसको छुटै खर्च भइराखेको हुन्छ ।
केही मान्छेहरु आफू अर्के ग्रहबाट आएको जस्तो गर्छन् । आफूलाई कोरोना लाग्दैन भनेझैं गर्छन् । लाग्यो भने त लागिहाल्यो नि सबैलाई । कहिलेकाहीं सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेर सम्झाउँदा ग्राहकहरु बुझ्दैनन् ।
सरकारको तर्फबाट त केही पनि भएको छैन । सरकारको तर्फबाट भएको भनेको सलुन पूृर्ण रुपमा बन्द गर्नु हो । तर त्यो समाधान होइन । पार्लर, सलुनमा मात्रै कोरोना सर्ने अरु क्षेत्रमा कोरोना नसर्ने भन्ने छैन नि । यसरी काम गर्नु भनेर सरकारले भनेको भए हामीलाई अलि सहज हुन्थ्यो होला तर सरकारले त्यसो गरेको छैन । पीपीई ,मास्क, पन्जा उपलब्ध गराएको भए पनि अलिकति राहत हुन्थ्यो ।
बैंकमा पैसा भए मात्र भान्सामा रासन हुन्छ । पैसा सकिएपछि के गर्ने ? कोरोनाको भन्दा पनि भोकको डर भयो । त्योभन्दा बरु आफै सावधानी अपनाएर काम गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो ।
केही वर्ष अघिसम्म सलुन पार्लरको व्यवसाय फस्टाएको थिएन । यसलाई मान्छेले हेर्न दृष्टिकोण फरक थियो । त्यस्तो अवस्थामा संघर्ष गरेर अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु ।
म इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे । आज भन्दा १३ वर्षअघि मैले पार्लरको काम रोजेको थिएँ । सुरुमा परिवार अनि समाजको लाञ्छाना सुनेँ । मानिसले कति हो कति प्रश्न गरे । तर आज तिनै मान्छे मेरो पार्लरमा कपाल काटिरहेका छन् ।
एक जना नातेदारले त मलाई यस्तो पढेको मान्छेले यस्तो काम किन रोजेको होला भनेर होच्याउनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँको बच्चा भविष्यमा गएर ‘अनिल दाइको’ जस्तो कपाल काटने बन्छु भन्छ । यो सुन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गरे जस्तो लाग्छ । म आफू पनि खुसी छु ।
इन्जिनियरिङ पढेको मान्छेले कपाल काटन सक्छ भने हामी किन गर्न सक्दैनौ भन्ने भावना मानिसमा ल्याउन पनि म यो पेसामा लागेको हुँ । अब आउने पुस्ताका लागि यो व्यवसायमा सम्भावना छ । सिर्जनशीलता देखाउने ठाउँ पनि हो यो । सबै पेशालाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अरु देशमा यो व्यवसायलाई धेरै सम्मान गर्छन् । तर हामी धेरै पछाडि छौँ ।
मेरो आमाबुबा पनि खुसी हुनुहन्छ अहिले त मरो कामबाट । उहाँहरुले साथ दिइराख्नु भएको छ अहिले । काम गर्दा सुरक्षित भएर काम गर्नू भन्नुहुन्छ ।
अर्काे ठाउँमा पनि शाखा खोल्ने विचार गरेको थिएँ । तर कोरोनाले गर्दा अप्ठेरो भयो । अब त लगानी गर्न पनि गाह्रो छ । फेरि बन्द हुने हो कि ? लकडाउन अझै कडा पो हुन्छ कि ? खुल्यो भने पनि माहोल कस्तो हुने हो ? केही टुंगो छैन । लगानी थप्ने कि नथप्ने, स्टाफ घटाउने कि नघटाउने सबै कुरामा अन्योल छ । तैपनि काम गरिराखेको छौं । सकारात्मक सोचाइ लिएर अघि बढिरहेका छौं । सबै राम्रो होला भन्ने आशा गर्छु ।
यो कथा अनिल दाससंग गरीएको कुराकानीमा रहेर अनुषा स्वाँरले लेख्नु भएको हो ।